29 | octobre | 2019 | InfoKmada
Fifidianana Ben’ny Tanàna : mizotra araka ny tokony ho izy ny fanotana ny bileta tokana
InfoKmada - 29 octobre 2019 0
Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanotana ny bileta tokana ampiasaina amin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny faha-27 novambra ho avy izao. Faritra 14 eto Madagasikara hatreto no efa mamaran’izany araka ny tatitra azo teo anivon’ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana androany.
Fandoavan-ketra eto Madagasikara : hisy fanavaozana
Mitotaly manodidina ny 300miliara ariary ny hetran’ny orinasa mbola tsy voaloa eto Madagasikara. Hisy ny fanavaozana ho raisina hanatsarana ny fandoavan-ketra manerana ny Nosy. Mandray anjara ao anatin'ny seminera atrehin'ireo mpanara-maso ny hetra avy amin'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny CREDAF isika eto Madagasikara. Tombony maro no ho azo aorian'izay.
Famatsiana solika : misy ny fepetra noraisina
Taorian’ny fivorian’ireo mpiantsehatra rehetra mikasika ny famatsiana solika eto amintsika, fepetra maromaro no noraisin’ny fitondram-panjakana. Ankoatry ny fanatsarana, nisy ihany koa ny sazy nomena ireo tsy nahatanteraka ny asany raha ny fanazavan’ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo androany.
OTIV Boeny : novidian’ny Paositra Malagasy
Taorian’ny olana fanodikodinam-bola teo anivon’ny OTIV Boeny , mpikambana 33 000 no nahiana ho very petra-bola. Entina manarina izany, novidian’ny Paositra Malagasy ny OTIV Boeny . Afaka apindram-bola amin’ny taha ambany indrindra arak’izany ny paositra malagasy. Tontosa androany ny fifaonaovan-tsoniam-pifanaraha teo amin’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny kajy mirindra, ny OTIV Boeny sy ny paositra malagasy.
Groupe Sofitrans : tsy manaiky hiala eny amin’ny seranam-piaramanidina
Tsy mbola nahita marimaritra iraisana ny Groupe Sofitrans sy ny Ravinala Airports manoloana ny fikasan’ny eo anivon’ny Ravinala Airports anilika ny Sofitrans. Tsy tokony ny orinasa vahiny no omena vahana hoy ireto farany, ary namafisin’izy ireo fa manaraka ny fenitra takiana ity orinasa ity.